Siyaasi Xaaji Maxmed Yaasiin Oo Ka Hadlay Xaalada Somaliya iyo Muranka ka jira Puntland
Home Opinion Siyaasi Xaaji Maxmed Yaasiin Oo Ka Hadlay Xaalada Somaliya iyo Muranka ka...
Siyaasiga soomaaliyeed ee Xaaji maxmed yaasiin Ismaaciil oo marar kala duwan ka qayb-galay doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa uu shir jara’id ku qabtay magalada nairobi.
Shirkiisan jara’id ayaa xaaji Maxmed waxaaa uu kaga hadlay arimo badan oo la xiriira xaalada soomaliya,xaalada Puntland iyo sidoo kale habkii ay u dhacday doorashadii madaxweyne ee dalka soomaliya oo qayb-galay xaaji maxmed yaasiin laftiisa.
Ugu horeyna waxaa uu hambaliyo u diray Madaxweynaha soomaliya ee ku guuleystay xilkaasi Xasan sheekh maxmuud,waxaana uu sheegay in madaxweyanah uu ka mid ahaa xisbi ay kaga dhawaaqen magalada muqdisho,isla markaasina uu wax badan ka yaqaano madaxweyanaha.
Xaaji maxmed yaasin aya kaga digay dawladani cusub in ay noqoto sidii labadii dawladood ee ka horeyay ka dib markii ay dagaal ku dhameysteen xiligooda,waxaana ugu baaqay in ay sameyso hab wada hadal oo ay la gasho xarakada al-shabab ee mucaaradka hubeysan ah.
Siyaasi Xaaji maxmed ayaa sidoo kale,waxaa uu soo hadal qaaday arimaha 10-ka wasiir ee dawlada soomaliya haatan magacowday,waxaana uu si caro leh u diiday in xiligan loo baahnaa 10-wasiir oo sheegay in xaalada soomaliya wax badan aysan ka qaban karin.
“hadii aan ka hadlo tirada wasiirada maahan mid kaafiyi karta xiligan xaalada ka jirta dalka,somaliya maaha dal muddo soo dhisnaa,burbur ayaa laga baxay,waxaana loo baahna in la badiyo wasiirada sifo ay waxs badan u qabtaan”ayuu hadalkiisa ku yiri xaaji maxmed yaasiin.
Mar uu ka hadlay xiriirka kala dhaxeya madaxda soomaliya ayaa waxaa uu sheegay mudane yaasiin in ay la kulmeen madaxweyanha soomaliya markii la doortay ka dibna uu ku wargaliyay in uu la tashi la sameyn doono,waxaase meesha uu ka saaray in dib danbe fariin dhinaca madaxweynaha ah ugu soo noqotay,isagoona sheegay in ra’isal-wasaaraha soomaliya Cabdi faarax uu la tashiyo la sameyay shaqsi ahaantiisa,balse uusan jirin xirii intaas ka dheer oo dhex maray madaxdan.
intii uu socday shirkani jara’id ayaanu weydiinay xaaji maxmed sababaha keenaya in musharaxiinta markii la dooran waayo ay dalka uga so baxaan oo dib danbe aysan ugu noqon,inta la gaadhaayo doorasho labaad oo madaxnimada soomaliya ah.
Waxaana uu ka hadlay shaqsi ahaantiisa sida uu arko arintan oo sheegay in ay tahay mid ku badan siyaasiyiinta soomalida,waxaana uu difaacay shaqsi ahaantiisa uu sheegay in muddo 90-casho ah uu ku sugnaa muqdisho,taasi oo la oran karo waxaa uu kaga badnaa musharixiintii kale ee xamar timid wakhtigii doorashada.
Dhinaca kalena waxaa uu siyaasi Xaaji Maxmed yaasiin ka hadlay arimaha ka soo cusboonaaday Puntland ee la xiriira doorashada Madaxnimada puntland,waxaana marka ugu horeysa uu ka sheekeyay nidaamkii ay puntland soo martay iyo dadka Puntland in aysan mar labaad diyaar u ahayn dagaal hubeysan oo dhulkooda ka dhaca.
“dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho,colaad sokeeye waxaa noogu filan tii ugu danbeysay ee Puntland ka dhacday,aniga waxaan ka mid ahaa Mucaaradka xiligaas,waana aragnay labadeena dhinacba dhibaatada ka timid dagaalkas marka waan ka degeynaa colaad danbe”ayuu hadalkiisa ku yiri Mudane Xaaji Maxmed yaasiin.
dhibaatoyinka ka yimida kursiga madaxnimada ayaa ku badan qaarada Africa mana aha wax hada ka bilaabanaya Puntland,xaaji Maxmed ayaa qeexay in mar walba dadka Puntland loo daneeyo,kuwaasi oo ku caano maalay nabad iyo nasiino,waxaana uu sheegay in kooxaha ku kacsan dawlada hada jirto wada hadal la galaan madaxda dawlada Puntland.
Ugu danbeytiina xaaji Maxmed yaasiin aya ku taliyay in madax walba oo soomaaliyeed uu ugu baaqayo in ay labada gacnood ku qaataan Calanka iyo kitaabka ale,taasi oo looga gudbi karo carqaladaha hortagan dawladaha la soo dhiso waxaana uu sheegay in hadii kitaabka ale wadanka lagu maamulo wax walba hagaagi doonaan isla markaasina umadda soomaliyed isku dumi doonto.